Lemba - Wikipedia
Ny Lemba, izay atao hoe wa-Remba na Mwenye, dia foko mainty hoditra banto ao amin'ny faritra atsimo ao Afrika. Eo amin'ny 70 000 eo ny isan'izy ireo ka ahitana azy ny ao Afrika Atsimo (indrindra ny ao amin'ny faritanin'i Limpopo), ny ao Zimbaboe, ny ao Malaoy, ary ny ao Mozambika. Manana fototarazo mitovy amin'ny an'ny Jiosy izy ireo. Na dia miteny banto mitovitovy amin'ny an'ireo foko hafa mifanerasera aminy aza izy ireo dia mitandrina fanao ara-pivavahana tahaka izay fahita amin'ny fivavahana jiosy sy silamo, sy fomban'ny vahoaka mpifindrafindra monina izay heverina fa mety avy any Afrika Avaratra na avy any Afovoany Akaiky. Araka ny filazan'izy ireo dia niampitampita tamin'ny alalan'ny lovatsofina izany fanao izany.
Ny fandinihana ny foto-tarazo dia mampiseho fitoviana amin'ny an'ny ampahan'ny vahoaka jiosy taranak'ireo mpisorona.
Araka ny lazain'ny Tudor Perfitt, mpampianatra momba ny sivilizasiona tatsinana sy afrikana ao amin'ny University of London, dia miisa 50 000 eo ny Lemba.
Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-20 ny haino aman-jery sy ny mpikaroka marp eny amin'ny oniversite dia nihaliana tamin'ny fitakian'ny Lemba ny maha taranaka iray azy ireo sy ny Jiosy   ; Ny fikarohana momba ny fototarazo tamin'ny taona 2000 dia nahitana fa ny ampahany amin'ny Lemba dia manam-piaviana tatsinanana  . Ny fikarohana natao taty aoriana dia tsy manohana ny fisian'ny fototarazo mitovy eo amin'ny Lemba sy ny Jiosy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemba&oldid=972740"
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2019 amin'ny 15:40 ity pejy ity.